Hapana munhu anoda ruwaya rwavanokwanisa kuti vave chinangwa chevashandi vane utsinye vachiedza kuba nhengo dzekambani kana kukonzera kukanganisa kusangano. Kuti udzivise izvozvo, iwe unoda kuwana nzira dzekuvimbisa kuti kune nzira shomanana dzingaita kuti vapinde. Uye izvi zvinopedzerwa muchikamu nekuita kuti mumwe nomumwe achinetseka pamusangano wako unozivikanwa, akataurirwa, uye akagadziriswa. Uye kune avo vanotambura izvo zvisingagoni kugadziriswa, pane chimwe chinhu chiripo kuti chidzikise. Nhanho yekutanga yakajeka; iyo kuongorora network yako kune avo vasina kusimba. Iri ibasa reimwe rudzi rwemapurogiramu anonzi kusvibiswa kuongorora mashandisi. Nhasi, tiri kuongorora 6 yakanakisisa yekutsvaga matanho ekushandisa uye software.
Ngatitange nokutaura pamusoro pekunetseka kwehutano-kana kuti tinofanira kutaura zvisingakwanisi-uye edza kutsanangura zvavari. Tichazotevera kurukura nezvekutengesa kushandiswa zvishandiso. Ticharondedzera kuti ndiani anovada uye nei. Uye sezvo kubvisa kunetseka kunongova chinhu chimwe chete chekuchengetedzwa kwekutambura-kunyange chakakosha-izvi ndizvo zvatichataura nezvotevera. Zvadaro, tichaona kuti kutyisidzika kwekutengesa kunowanzoshanda sei. Zvose zvakasiyana zvakasiyana asi pamwoyo yavo, pane dzimwe nguva kufanana kupfuura kusiyana. Uye tisati tadzokorora zvakanakisisa kushungurudzwa kushandiswa zvishandiso uye software, tinokurukura maitiro avo makuru.
Makombiyuta matsuro uye masangano akawana hukuru hwekuoma kunzwisisa kupfuura kare. Nhasi muvharesi wevadiresi aigona kunge achishanda mazana emaitiro. Chimwe nechimwe chezvinhu izvi chirongwa chekombiyuta, mamwe acho mapurogiramu makuru anowanikwa nezviuru zvemitsara yemutsetse wekodha. Uye mukati memutsetse uyu, pangave-pane pangangove-yose yezvinhu zvisingatarisirwi. Imwe nyanzvi inogona, pane imwe nguva, yakawedzera chimwe chinhu chekunze kwemukati kuti kugadzirisa dambudziko kunyore. Uye gare gare, izvi zvingave zvisiri izvo zvakakonzera kushandurwa kwokupedzisira. Ikoko kunogonawo kunge kune dzimwe mhosho mumashoko ekugonesa achaita kuti zvisatarisirwe-uye zvisingadi-zvitsva mune imwe mamiriro ezvinhu chaiwo.
Zvose zveizvi zvinogona kushandiswa kuedza kuwana ruzivo rwemaitiro uye data. Pane boka guru revanhu vari kunze uko vasina chakanaka chekuita pane kuwana makomba aya uye kuvashandisa kuti varwise zvirongwa zvako. Zvinotambudza ndezvatinoti masango aya. Kana ikasara isina kuchengetedzwa, kusagadzikana kunogona kushandiswa nevashandisi vane utsinye kuti vawane maitiro ako uye data-kana zvichida zvakanyanya, data yevabereki vako-kana kuti zvingakonzera zvimwe zvinokuvadza zvakadai sokuita kuti masero ako asakwanise.
Zvinotambudza zvinogona kuva pose pose. Vanowanzowanika mumashandisirwo emapurogiramu emashandisi enyu kana maitiro avo ekushanda asi ivowo varipo mumashandisi ekubatanidza shanduko, shanduko, routers uye kunyange zvigadzirwa zvekuchengetedza zvakadai semoto. Mumwe unonyatsoda kuvatsvaga pose pose.
Kuongorora Zviratidzo - Ndezvipi Uye Vanoita Sei?
Kushungurudza kushandiswa-kana kuongorora-zvishandiso zvine basa guru rekutanga: kuratidza kusagadzikana mune zvirongwa zvako, zvigadzirwa, zvigadzirwa, uye software. Iko kunonzi ma scanners nokuti kazhinji vanowanzoongorora zvishandiso zvenyu kuti vatsvake kutadza kunzwisisika.
Asi matambudziko ekutsvaga matambudziko anowanikwa sei matambudziko anowanzo asiripo pachena? Kana ivo vakanga vari pachena, vashanduri vangadai vakataura navo vasati vasunungura software. Mutsa kana akaita sevharusi yakachengetedza software inoshandisa zvirwere zvekutsvaga zvinyorwa zvinyorwa zvekuona kombiyuta virusi zvinyorwa, kunyanya kunetseka zvipimo zvinotsigira kunetseka kwemasayenzi uye kuongorora zvirongwa zvekunetseka. Izvi zvinyorwa zvekunetseka zvinogona kuwanika kubva kune mazita anozivikanwa ezvokuchengetedza mabhizimisi ekuchengetedzwa kwemasimba akazvitsaurira kuwana kushaya simba mune software uye hardware kana vanogona kunge vane zvigadzirwa zvemabhuku kubva kune mutengesi wezvombo. Sezvaunotarisira, huwandu hwekuona iwe hunova hwakanaka sehwandu hwekutsvaga iyo iyo yako inoshandisa.
Kuverenga Zvirongwa - Ndiani Anozvida?
Mhinduro imwechete-kumubvunzo iwoyo yakajeka pachena: Munhu wese! Hapana munhu mupfungwa dzake dzakanaka angafunga nezvekutamba kombiyuta pasina hutachiona huchengetedzwa mazuva ano. Saizvozvowo, hapana mutungamiri wenethiwekhi anofanira kunge asina kunze kweimwe nzira yekushungurudzika kuonekwa. Kurwisa kungave kuri kuuya kubva kune imwe nzvimbo uye kukurova iwe kwaunenge usingatarisiri ivo. Iwe unofanirwa kuziva nezvenjodzi yako yekutsvaga.
Izvi zvinogona kunge chimwe chinhu chingave chinodaro chakaitwa nemaune. Kunyanya, zvakadaro, iri basa rinenge risingabviri. Kungova kuwana ruzivo pamusoro pekutadza, regai kuverenga nzira dzenyu dzekuvapo kwavo, zvingatora huwandu hwakawanda hwezvinhu. Mamwe masangano akazvitsaurira kuti awane dambudziko uye anowanzoshandisa mazana kana zvisati zvuru zvevanhu.
Munhu wose anotarisira mhando dzekombiyuta kana maikironi angabatsirwa zvikuru nekushandisa shanduko yekutsvaga shanje. Uyezve, kutevedzera mitemo yekutonga yakadai sa SOX kana PCI-DSS inowanzomira kuti iwe uite. Uye kunyange kana vasingazvidi, kutevera kunowanzova nyore kuratidza kana iwe unogona kuratidza kuti uri kuongorora network yako nekuda kwekunetseka.
Kushungurudzwa Kutungamirirwa muNutshell
Tsvaga kushaya simba kushandisa imwe shanduro yekushandisa inokosha. Ndiyo danho rokutanga mukudzivirira kurwisana. Asi iyo inofadza isina maturo kana isiri chikamu chekugadzirisa kwekugadzirisa kutadza. Kuongororwa Kuziva maitiro hausi intrusion Prevention Systems uye, nenzira imwecheteyo, Network masimba ekutsvaga zvidzidzo-kana kuti vazhinji vavo-vanoona chete kushaya simba uye vanokuchenesai nezvekuvapo kwavo.
Iko zvino kukwira kwauri, mutungamiri, kuti ave nedzimwe nzira panzvimbo yekutarisa kuonekwa kushaya simba. Chinhu chokutanga chavanofanira kuita pavanoona ndeyekuongorora kutadza. Iwe unoda kuve nechokwadi kuti unoona kushaya simba ndeyechokwadi. Kushungurudza kushandiswa kwezvombo zvinoshandiswa kusarudza kukanganisa kune rumwe rutivi rwekuchenjerera uye vazhinji vacharondedzera imwe nhamba yezvipo zvenhema. Uye kana nekunetseka kwechokwadi, vangave vasina hanya. Semuenzaniso, kushandiswa kusina kushandiswa kwePI pane sevhavha inogona kunge isingave yakakosha kana ichitsvaga kumashure kwechiedza chemasikati chinodzivirira chikwangwani ichocho.
Pane imwe nguva kushaya njodzi kunoongororwa, inguva yekugadzirisa nzira yekugadzirisa-uye kugadzirisa-iyo. Kana zvikawanikwa mune software iyo sangano rako risingashandisi-kana risingashandisi zvachose-nzira yako yakanakisisa yekuita ingave yekubvisa pangozi ye software uye kuitora iyo nehumwe hupi hupi hunoita basa rakafanana. Mune mamwe mamiriro ezvinhu, kugadzirisa kusava nyore kwakaoma sekushandisa imwe chigamba kubva muparidzi wepurogiramu kana kuti kuvandudza kusvika kune shanduro yezvino. Vakawanda vanotambura kushandiswa zvishandiso vachaona zvirongwa zviripo zvekushaya simba kunowanikwa. Zvimwe zvinetso zvinogona kugadziriswa chete nekugadzirisa imwe sarudzo yekugadzirisa. Izvi zvinonyanya kuitika pamashandisirwo ekubatanidza mitambo asi zvinowanzoitikawo nemashandisirwo emapurogiramu pamakombiyuta.
Zvinhu Zvikuru Zvokuvhiringidzika Matanho ekudhinda
Pane zvinhu zvakawanda zvinofanirwa kutariswa kana munhu achisarudza chishandiso chekutadza kuona. Chimwe chezvinhu zvakakosha zveaya maturusi ndeye mhando yemidziyo yavanogona kuongorora. Iwe unoda chishandiso chinokwanisa kuongorora zvese zvishandiso zvaunazvo. Kana iwe uine maseva mazhinji eLinus, semuenzaniso, iwe uchazoda kusarudza chishandiso chinogona kuzviongorora, kwete icho chinongobata chete Windows zvishandiso. Iwe zvakare unoda kusarudza scanner iyo iri yechokwadi sezvinobvira munharaunda yako. Iwe haungade kunyura mune zvisina basa zviziviso uye manyepo positives.
Chimwe chikuru chakasiyana chinokonzerwa neshoko rekuchengetedzwa kwemashoko. Inochengetedzwa nevatengesi here kana kuti inobva kusangano rakasununguka? Inogara yakarongeka sei? Inochengetwa munzvimbo yako kana mugore here? Iwe unofanirwa kubhadhara mari yakawedzerwa yekushandisa database yekutambura kana kuwana zvinyorwa? Izvi ndizvo zvinhu zvose zvaunoda kuzive usati watora chombo chako.
Zvimwe zvinokonzera kushungurudzika zvinoshandisa nzira yakawanda yekunyatsoongorora iyo inogona kukanganisa kushanda kwehurongwa. Izvi hazvirevi chinhu chakashata sezvo inonyanyisa yakawanda inowanzova yakanakisa kupikisa asi kana ikakanganisa kushanda kwehurongwa, iwe unoda kuziva nezvayo uye kuronga hurongwa hwako zvakakodzera. Nenzira, kuronga ndeimwe chimwe chinhu chinokosha chekutengesa kushandiswa kwekushandisa matanho. Zvimwe zvishandiso hazvikwanisi kunyange zvakarongerwa zvidzidzo uye zvinoda kutanga zvinyorwa.
Kune zvimwe zvinenge zviviri zvinokosha zvinokosha zvekunetseka kuongorora mabhidhiyo: kushandura uye kubvisa. Chii chinoitika kana kunetseka kuwanikwa? Icho chinyorwa chakajeka uye chiri nyore kunzwisisa here? Inoshandurwa sei? Icho chiri pane-skrini yakawanda, email, mharidzo? Uye kunyanya kukosha, iyo chigadziro inopa humwe ruzivo rwokuti ungagadzirisa sei kusagadzikana iyo inoratidza? Zvimwe zvishandiso zvinoita uye vamwe hazviiti. Vamwe vanotova nokugadzirisa mafungiro ehumwe hutambudziko. Zvimwe zvishandiso zvinosanganiswa ne patch management software sekugadzirisa purogiramu kazhinji ndiyo nzira yakanakisisa yekugadzirisa kushaya simba.
Nekupa ruzivo, ichi kazhinji kacho nyaya yezvaunoda. Zvisinei, unofanirwa kuve nechokwadi chokuti ruzivo rwaunotarisira uye rwaunoda kuwana mumishumo ichange iripo. Zvimwe zvishandiso zvinongodaro zvataurwa kare, vamwe vachakurega iwe uchinje mishumo yakagadzirwa. Uye zvakanakisisa-kunyanya kubva pamamiriro ekutaura-zvichakubvumira kuti iwe ugadzire maitiro emitambo kubva pakutanga.
Iye zvino zvatakadzidza zvishoma nezvekunetseka kwekushandisa matanho, regai tiongorore zvimwe zvepakiti zvakanakisisa kana zvinonakidza zvatingawana. Takaedza kubatanidza kusanganiswa kwebhadharo uye zvishandisi zvekushandisa. Panewo zvishandiso zvinowanikwa muhurukuro yakasununguka uye yakabhadharwa.
Kana iwe usati wati wakaziva SolarWinds, kambani iyi iri kuve yakagadzira imwe yepamusoro yenhepfenyuro yekushandisa zvigadzirwa zvemakore anopfuura 20. Pakati pezvigadzirwa zvayo zvakanakisisa, SolarWinds Network Performance Monitor inogara ichinyanya kurumbidzwa nekurumbidzwa kwepfungwa seimwe yezvakanakisisa SNMP network bandwidth monitoring tool. Iyo kambani iyiwo yakakurumbira kune zvishandiso zvayo zvepachena. Izvo zvinhu zviduku zvishandiso zvakagadzirirwa kugadzirisa rimwe basa rekushandisa mitambo. Pakati pezvinonyanya kuzivikanwa pane idzi zvishandiso zvepachena ndey subnet calculator uye TFTP seva.
Chimbo chatinoda kutaurira pano chigoni chinonzi SolarWinds Network Configuration Manager. Izvi, zvisinei, kwete chaizvoizvo kushungurudza kushandiswa kweshandiswa. Asi pane zvikonzero zviviri zvakakonzera kuti nei takasarudza kuisa chinhu ichi pane zvatinonyora. Chigadzirwa chacho chinokonzera kuongororwa kwehutano uye chinotarisa rudzi rwehutano hwehutachiona, rumwe rwunokosha asi kuti harusi zvimwe zvimwe zvishandiso zvinotarisa, kusagadziriswa kwemichina yekushandisa.
Sangano reSolarWinds Network Configuration Manager rekushandisa sekushungurudza kushandiswa kwekushandisa iri mukugadziriswa kwemagetsi ekugadzirisa zvigadzidzo zvekukanganisa uye kusiya. Icho chishandiso chinogonawo nguva nenguva kutarisa zvigadziridzo zvekushandisa kwekuchinja. Izvi zvinobatsirawo sezvo mamwe maitiro anotanga anotanga nekugadzirisa imwe shanduro yekugadzira mitambo-iyo isingawanzochengete sevashumiri-nenzira inogona kuita kuti dzimwe nzira dzisvike. Icho chigoni chinogona kukubatsira iwe nemitemo kana kutenderwa kwekutonga nemashandisirwo ayo ezvigadzirisiti ekugadzirisa zvishandiso izvo zvinogona kutora zvigadziridzo zvakagadziriswa, kuona kubuda-kwe-kushandurwa kwehutano, kugadziriswa kwekuongorora, uye kunyange kukanganisa kwakarurama.
Iyo software inobatanidza neNational Vulnerability Database iyo inoita kuti ifananidzwe kuva pane zvinyorwa zvedu zvakare. Inosvika kune yeCVE yakanyanya kunyanya kuongorora kusagadzikana mune zvigadzirwa zveCisco. Ichishanda pamwe nemhando ipi neipi yeCisco inoshandisa ASA, IOS, kana Nexus OS. Zvechokwadi, mamwe mairi maviri anobatsira, Network Insights yeAAA uye Network Insights yeNexus yakavakirwa zvakanaka muchibereko.
Mitengo yeSolarWinds Network Configuration Manager inotanga pa $ 2,895 yepamusoro kune nhamba dze 50 dzakagadzikana uye dzinofanana maererano nhamba ye nodes. Kana iwe uchida kupa chiyi ichi edza, shanduro yekusangana yeC30-day inogona kutorwa kubva kuSolarWinds.
KUDZIDZWA KUSASUNGWA: SolarWinds Network Configuration Manager
Iyo Microsoft Baseline Security Analyzer, kana MBSA, chishandiso chakati kurei kubva kuMicrosoft. Kunyangwe iri shoma-pane-yakanaka sarudzo yemasangano makuru, chishandiso chinogona kuve chakaringana kumabhizinesi madiki, ayo ane mashoma maseva chete. Ichi chishandiso cheMicrosoft saka iwe zvirinani usatarisira t kuti utarise scan asi zvigadzirwa zveMicrosoft kana iwe unozonyadziswa Izvo, zvakadaro, ichaongorora iyo Windows inoshanda sisitimu pamwe nemamwe masevhisi senge Windows Firewall, SQL server, IIS uye Microsoft Office zvinoshandiswa.
Asi chigadziriro ichi hachirevi kuti chinetso chakangoita sevamwe matanho ekuchengetedza. Chinoita ndechokutsvaga mabheji akashayikwa, mapepa emabasa uye zvigadzidzo zvekuchengetedza pamwe nekuongorora zvirongwa zvemashoko ekutungamirira. Iyo MBSA yekubika injini ichakuita kuti iwe uwane runyora rwekushayikwa kwezvinhu zvisina kunaka uye kusagadziriswa.
Kuva chigadzirwa chekare kubva kuMicrosoft, MBSA haina kunyatsopindirana nayo Windows 10. Shanduro 2.3 ichashanda pamwe yazvino vhezheni ye Windows asi zvingangoda kumwe kubvisika kuchenesa manyepo enhema uye kugadzirisa macheki asingakwanise kupedzwa. Semuenzaniso, chishandiso ichi chinozivisa nhema Windows Kwidziridzo haina kubvumidzwa pa Windows 10. Chimwe chinokanganisa chigadzirwa ichi ndechekuti hachizowone kusagadzikana kweMicrosoft kana kusagadzikana kwakaomarara. Ichi chishandiso chiri nyore kushandisa uye chinoita basa racho nemazvo. Inogona kunge iri chishandiso chakaringana chesangano diki rine vashoma chete Windows makomputa.
3. Vhura Vulnerability Assessment System (OpenVAS)
Chimbo chedu chinotevera chinonzi "Open Vulnerability Assessment System," kana kuti OpenVAS. Icho chigadziro chezviitiko zvakasiyana siyana uye zvishandiso. Vose vanobatanidza kuita kuti ive yakazara uye ine simba yekunetseka kupinza shanduro. Nheyo yeWorldVAS ndiyo chikamu cheGreenbone Networks 'kushungurudza sarudzo yekugadzirisa kubva pane izvo zvikamu zvakapiwa munharaunda kwemakore anenge gumi. Izvo zvakasununguka zvachose uye zvizhinji zvayo chikamu chiri pachena-asi vamwe havasi. Mukana we OpenVAS unouya nepamusoro makumi mashanu emamiriyoni eUnited Vulnerability Tests anovandudzwa nguva dzose.
Kune zvikamu zviviri zvinokosha zve OpenVAS. Chokutanga chikamu ndiyo OpenVAS scanner. Sezvo zita rayo rinoreva, ndiro rinokonzera kuongorora kwezvinangwa makombiyuta. Chikamu chechipiri ndiye mutariri weOverVAS uyo anotarisira zvinhu zvose zvakadai sekudzora scanner, kuunganidza mhinduro, nekudzichengetedza mukati meSquL database. Izvo zvinosanganisira zvose browser-based uye command-line user interfaces. Chimwe chikamu chemugadziro ndecheNhepfenyuro yeUnited Vulnerability Tests. Iyi database inogona kuwana zvinyorwa zvayo kubva kuGreenborne Community Feed kana kuti iyo yakabhadharwa Greenborne Security Feed.
Retina Network Community ndiyo yekusununguka kwe Retina Network Security Scanner yakabva kune AboveTrust, iyo ndeimwe yezvinonyanya kuzivikaniswa kutengesa matanho. Izvi zvakanyanyisa kunetseka scanner Yakazara nezvinhu. Icho chishandiso chinogona kuita zvakakwana kuongororwa kuongororwa kwemasimba asina kukwana, zero-zuva kusagadzikana, uye kusagadzikana kwekugadzirisa. Inoshamisirawo mapurogiramu emudzimai anowirirana nemabasa emabasa, nokudaro achiita kuti kushandiswa kwepurogiramu kuve nyore. Ichi chigadzirwa chinonzi metro style intuitive GUI iyo inobvumira kushandiswa kushandiswa kwemamiriro.
Retina Network Community inoshandisa dhiyabhorosi yakafanana yekushungurudzika semhuri yakabhadharwa. Iyo yakazara database ye network inenge isina simba, nyaya dzekugadzirisa, uye dzisina kukwana dzinoshandiswa patsva uye dzinofukidza hutano hwakasiyana-siyana hwemashandisirwo ekushandisa, zvigadzirwa, zvidzidzo, uye nzvimbo dzakanaka. Pachiri pamusoro iwoyo, chigadzirwa ichi chinotsigira zvakakwana nzvimbo dzeVMware uye inosanganisira paIndaneti uye pasina virtual image scanning, virtual application scanning, nekubatanidzwa ne vCenter.
Kune, zvisinei, zvakadaro, chinetso chikuru kune Retina Network Community. Icho chishandiso chinongogumira kuongorora 256 IP adresses. Izvi zvingaita sezvikaita zvakanyanya kana iwe uri kutarisira network huru asi inogona kunge yakakwana kudarika masangano mashoma maduku. Kana nzvimbo yako yakakura kupfuura iyo, zvose zvataitaura pamusoro peiyo chigadzirwa ndezvechokwadi nezvehama yake huru, Retina Network Security Scanner iyo inowanikwa muEast and Unlimited editions. Purogiramu ipi zvayo ine imwechete yakawedzerwa inoiswa kana ichienzaniswa neRetina Network Community scanner.
Icho chingave chisingazivikanwi seRetina asi Nexpose kubva kuRidid7 chimwe chiitiko chinonyanyozivikanwa chekutengesa. Uye Nexpose Community Edition iyi inongororwa zvishoma nezvishoma ye Rapid7 yakazara yakaoma yekutengesa. Zvisizvo zvinogadzirwa izvi zvakakosha, zvakadaro. Semuenzaniso, unogona kushandisa chete chigadzirwa kuti uone huwandu hwai 32 IP aderesi. Izvi zvinoita kuti zvive sarudzo yakanaka chete kune zviduku kudarika mitambo. Uyezve, chigadzirwa chacho chinogona kushandiswa chete kwegore rimwechete. Kana iwe ukakwanisa kurarama nemuchina wacho, zvakanakisisa.
Nexpose Nharaunda Yekutsikisa inomhanya pane epanyama michina inomhanya chero Windows kana Linux. Iyo zvakare inowanikwa seye chaiyo mudziyo. Yayo yakakura scanning kugona ichabata manetiweki, anoshanda masystem, webhu kunyorera, dhatabhesi, uye chaiwo nzvimbo. Nexpose Nharaunda Yevashandisi inoshandisa inochengetedzwa chengetedzo iyo inogona kungoerekana yaona uye kuongorora zvishandiso nyowani uye hutsva hutsva nguva iyo yavanowana yako network. Ichi chinhu chinoshanda pamwe chete nehukama hwakasimba kuVMware neAWS. Ichi chishandiso chinosanganisirana neiyo Sonar yekutsvagisa chirongwa kuti ipe yechokwadi mhenyu yekutarisa. Nexpose Nharaunda Edhisheni inopa yakasanganiswa yemutemo kuongorora kuti ubatsire mukuteedzera nemazita akakurumbira seCIS neNIST. Uye chekupedzisira asi chisiri chidiki, chishandiso chishongedzo chekugadzirisa chinokupa nhanho-nhanho mirairo pane zvekugadzirisa zviito.